Chinozvininipisa Chikwata Chinovhura Bundle YeMjaho Fans | Linux Vakapindwa muropa
Muchaziva mose Chikwata chinozvininipisa, uye vangangoita mese muchaziva kuti bundle chii, ndiko kuti, paketi yemitambo yemavhidhiyo inoderedzwa mumutengo kana iwe uchivatenga vese pamwechete uye nekudaro inomiririra chinonakidza chinopihwa kune vashandisi. Zvakanaka, iwe unofanirwa kuziva kuti timu iyi yaburitsa vhidhiyo mutambo hunble kubva kunogadzira Codemaster uye vese zvavo vakazvipira kudingindira rekumhanya uye kumhanya kwemota. Ichave zvakare kuwanikwa yeGNU / Linux, pamwe neMac neWindows, kuti tikwanise kunakidzwa nezvimwe zvacho (kwete ese aripo eLinux).
Tichatove ne40% discount coupon yeF1 2017 uye a kiyi yeMcLaren DLC. Iko kupihwa kukuru kunosanganisira nhamba hombe yemazita ane simba uye nemutengo wakaderera, sezvo uchifanira kuziva kuti zvese izvi mazita angadhura akatenderedza € 450 kana tikazvitenga zvakasiyana. Naizvozvo, kana iwe wanga uchifunga kutora chero yeiyi mitambo yemavhidhiyo, usamirira uye tora mukana weichi chikuru kupihwa kwaunogona kusarudza chauchabhadhara. Unogona kuishandisa sekutenga kwakanaka kupa mumwe wavo yeKisimusi ...
Pakati pemitambo yemavhidhiyo inosanganisirwa mazita anonakidza seF1 Race Nyeredzi, F1 2011, F1 2012, Toybox Turbos, uye kana iwe ukapfuura paavhareji mutengo unogona kuwana chakatonyanya kunakira kupihwa neF1 2014, Grid 2, F1 2015, uye F1 Race STARS + Mwaka Pas, pamwe nemaponi ane 60% dhisikaundi paDirf 4 uye 40% ye F1 2017 kuchitoro Chinozvininipisa. Uye kune izvo tinowedzera iyo DLC kune ese ari maviri…, Micro Machines World Series, uye F1 2016. Uye zvese kusvika Zvita 19, 2017 !!!
Uye pamutengo wakakwira zvishoma, isu taizosvika padanho repamusoro neDirt Rally, F1 2016 Career Booster Pack DLC uye Grid 2 Yese Mune DLC. Unotoziva kuti kuve a bundle iwe uchasarudza zvekubhadhara, uye kune uyo mari inonangidzirwa (rudo, vanogadzira, uye Humble timu), uye sechisungo chakanaka charity ichatora chinotora chikamu chemari. Mune ino kesi, ivo vanowana vanozove Delaware Aviation Museum Foundation Corp, kunyangwe iwe uchikwanisa kusarudza rakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Anoninipisa Chikwata anotangisa chisumbu chevateveri vemujaho
Kune mashoma kwazvo ari eLinux. Mazhinji ndeeWindows chete.
Pamamwe mana ekutanga ebatch (F1 Race STARS, F1 2011, F1 2012 uye Toybox Turbos) hapana ndeyeLinux) uye iyo yese; chete F1 2015, F1 2017 uye yavo DLC inowanikwa yeiyo penguin system. Zvinonyadzisa :(
OpenIL: kugoverwa kweNXP Semiconductors kune iyo indasitiri